Iinkcukacha eziphambili kunye nezihloko eziMkhulu kwiincwadi ze-13 kunye ne-14 zeBhayibhile
Akumele kubekho abaninzi abaqeqeshi bokuthengisa kwihlabathi la mandulo. Yiyo kuphela isizathu esinokucinga ngazo ngokuvumela icandelo leencwadi ezithandwayo, ezithengisa kakhulu kwihlabathi ukuba zibizwa ngokuba "IziKronike."
Ndiyathetha, uninzi lwezinye iincwadi eBhayibhileni zineenkcukacha zokubamba, ukunceda amagama. Khangela " 1 no-2 Kumkani ," umzekelo. Ngulo hlobo lwesicatshulwa ongayifumana kwi-rack rack kwivenkile yokuthengisa kule mihla.
Wonke umntu uyakuthanda i-royals! Okanye ucinge nge " IZenzo Zabapostile ." Leli gama elinomxholo othile. Kwakunjalo "iSityhilelo" kunye " neGenesis " -amazwi onke azisa imfihlelo kunye nokugxeka.
Kodwa "iIkronike"? Okubi nakakhulu: "1 yeziKronike" kunye ne "2 yeziKronike"? Kuphi uvuyo? Uphi i-pizzazz?
Enyanisweni, ukuba sinokudlula igama elibi, iincwadi ze-1 neye-2 yeziKronike ziqulethe ingqalelo yolwazi olubalulekileyo kunye nezihloko eziwusizo. Ngoko masingene ngesangqa esifutshane kule mibhalo enomdla neyibalulekileyo.
Asiqinisekanga ukuba ngubani owabhala 1 kunye neye-2 yeziKronike, kodwa abaphengululi abaninzi bakholelwa ukuba umbhali nguEzra umbingeleli - uEzra ofanayo wavuma ngokubhala incwadi kaEzra. Enyanisweni, i-1 kunye neye-2 yeziKronike yayingaba yinxalenye yechungechunge lweencwadi ezine eziquka uEzra noNehemiya. Lo mbono uhambelana nezobuYuda namaKristu.
Umbhali weeKronike wasebenza eYerusalem emva kokubuya kwamaYuda ekuthinjweni eBhabheli, oku kuthetha ukuba wayephila ngexesha likaNehemiya - indoda eyayizama ukuvuselela udonga olujikeleze iYerusalem.
Ngaloo ndlela, i-1 ne-2 yeziKronike zazibhalwa malunga ne-430 ukuya ku-400 BC
Elinye iqhosha elincamisayo lokuzikhethela malunga neyoku-1 neye-2 yeziKronike kukuba ekuqaleni kwakujoliswe ukuba ibe enye incwadi-enye ingxelo yembali. Le akhawunti mhlawumbi yahlula kwiincwadi ezimbini kuba iincwadi azizange zifakwe kumqulu omnye.
Kwakhona, iindidi ezimbalwa zokugqibela ze-2 yeziKronike zivakalisa iindinyana zokuqala kwiNcwadi kaEzra, esinye isibonakaliso sokuba uEzra wayengumlobi wezeKronike.
Njengoko ndithethe ngaphambili, ezi ncwadi zabhalwa emva kokuba amaYuda abuyele ekhaya lawo emva kweminyaka emininzi ekuthinjweni. IYerusalem yayinqotshwe nguNebhukadenetsare , kwaye ezininzi iingqondo ezigqwesileyo neqaqambileyo kwaYuda zazisuswa eBhabhiloni. Emva kokuba amaBhabhiloni ahlulwa ngamaMede namaPersi, ekugqibeleni amaYuda avunyelwa ukuba abuyele ezweni lawo.
Ngokucacileyo, eli lixesha elibuhlungu kubantu bamaYuda. Babenombulelo ukuba babuyele eYerusalem, kodwa nabo bakhala ngesimo esibi saloo sixeko kunye nokungabi nokhuseleko lwabo. Ngaphezu koko, abemi beYerusalem babefuna ukuphinda baphinde bazibonele njengabantu kwaye babuyisane njengenkcubeko.
I-1 neye-2 yeziKronike zithetha amabali abantu abaninzi ababhalwa yiBhayibhile, kuquka uDavide , uSawule , uSamuweli , uSolomon , njalonjalo. Iziqalo zokuqala ziquka iintlobo ezininzi zokuzalwa-kubandakanya iirekhodi ezivela kuAdam ukuya kuYakobi, kunye neloluhlu lwenzalo kaDavide. Le nto inokuziva iyancwina kubafundi banamhlanje, kodwa yayiza kubaluleka kwaye iqinisekisa abantu baseYerusalem ngaloo mini bazama ukuxhamla kunye nelifa labo lamaYuda.
Umbhali we-1 neye-2 yeziKronike naye waya kwixesha elide ukubonisa ukuba uThixo ulawula imbali, kunye nezinye iintlanga kunye neenkokheli ezingaphandle kweYerusalem. Ngamanye amazwi, iincwadi zenza iphuzu lokubonisa ukuba uThixo ulawula. (Funda iIkronike 10: 13-14, umzekelo.)
Imikhosi nayo igxininisa umnqophiso kaThixo noDavide, kwaye ngokukhethekileyo kunye nendlu kaDavide. Lo mnqophiso wawusungulwa ekuqaleni kweyoku-1 yeziKronike 17, kwaye uThixo wawuqinisekisa ngonyana kaDavide, uSolomon, kwi-2 yeziKronike 7: 11-22. Ingcamango ebalulekileyo emva komnqophiso kukuba uThixo wamkhethe uDavid ukuba amise indlu yakhe (okanye igama laKhe) emhlabeni kwaye ukuba umzukulwana kaDavide wawuza kubandakanya uMesiya - esiyaziyo namhlanje njengoYesu.
Ekugqibeleni, 1 neye-2 yeziKronike kugcizelela ubungcwele bukaThixo kunye noxanduva lwethu lokumnqula ngokufanelekileyo.
Khangela kwi-1 yeziKronike 15, umzekelo, ukuba ubone ukunyamekela kukaDavide ukuthobela uMthetho kaThixo njengoko iTyeya yomnqophiso yayiqhutyelwa eYerusalem kunye namandla akhe okunqula uThixo ngaphandle kokushiya ukubhiyozela eso siganeko.
Konke kuzo zonke, i-1 kunye neye-2 yeziKronike zisinceda siqonde ubungqina bamaYuda abantu baseTestamente Endala, kunye nokuhambisa i-chunk enkulu yeMbali-Old Testament.
Iiminyaniso zeBhayibhile zobuhle
Inqanawa kaNowa kunye noMkhukula weBhayibhile Inkcazo
Ukholo Lomfazi waseSyro-Foinike kuYesu (Marko 7: 24-30)
I-Quiz ye-Intermediate-Level English Review Quiz
Hlela i-CheckBox.Checked ngaphandle kweNgqungquthela yokuChofoza
Funda ngohlobo lwegazi
Ingaba Zizibilini Zizive Iintlungu?
Imbali yoMbutho weeNtlalo zeVangeli
Funda amazwi angama-100 aseSpain ofuna ukuyayazi
Funda indlela yokudibanisa "Ingxaki" (ukufumana) ngesiFrentshi
Isicwangciso soSifundo seNkcazelo yeKhomishoni yeNdlm
I-Titanosaurs - I-Last of the Sauropods
20 Abafazi abaBaziwayo beBhayibhile
UJean Paul Sartre 'Utshintshelo lwe-Ego'